मात्र २६ बर्षीया यी युवतीको व्यापार र कमाई थाहा पाउँने जो कोही चकित !:: Naya Nepal
मात्र २६ बर्षीया यी युवतीको व्यापार र कमाई थाहा पाउँने जो कोही चकित !
काठमाडौं । हर सफल व्यक्तिले सुरुवात सानोबाट नै गरेका हुन्छन् । यस्तै एक सफलताको कहानी आज हामी लिएर आएका छौँ । भारतको राजधानी दिल्ली निवासी वन्शिका चौधरीले कोरोनासँग लडईं गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई पीपीई किट प्रदान गर्दै आएकी छिन् ।
हालसम्म उनले २०० भन्दा बढी अस्पतालमा ६ लाख भन्दा बढी पीपीई किटहरू आपूर्ति गरिसकेको जानकारी दिइन् । अर्कोतिर उनको कम्पनीले २०० भन्दा बढी होटल, स्कूल र रेष्टुरेन्टहरूको लागि पोशाक तयार गर्दछ । अहिले २०० भन्दा बढी व्यक्ति उनीसँग जोडिएका छन् । गत वर्षमात्रै उनको भारु ५ करोडको कारोबार भएको उनले बताइन् ।
२६ वर्षीया वन्शिका हाल मुम्बईमा बस्छिन् । उनी गत बर्ष विवाह पछि मात्र दिल्लीबाट बसाईसराई गरेर मुम्बई पुगेकी हुन् । उनले दिल्लीमा स्कुलको पढाई पूरा गरे पछि सिंगापुरबाट फेशन डिजाइनिंगमा स्नातक गरेकी छिन् । वन्शिका भन्छिन्, ‘स्नातक अध्ययनको समयमा हामीले गत बर्षमा एक ब्रान्ड र व्यापार मोडेल सिर्जना गर्ने परियोजना पायौं । यो हाम्रो पाठ्यक्रमको हिस्सा थियो ।
मैले त्यसलाई कन्या नाम दिए । यस समयमा, मैले महिलाहरूको फेसन ट्रेन्डलाई हेर्दै धेरै अनुसन्धान गरे । विशेषज्ञहरूको सहयोग लिए, उनीहरूबाट कपडा र मार्केटिङको बारेमा जानकारी प्राप्त गरे । प्रोजेक्ट सम्पन्न हुने बित्तिकै मलाई फेशन, कपडा र बजारको राम्रो ज्ञान थियो । जब मेरो स्नातक पूरा भयो, मैले निर्णय गरें कि अब म यो प्रोजेक्टलाई भविष्यमा व्यवसायमा रूपान्तरण गर्नेछु ।’
सन् २०१५ मा सिंगापुरमा अध्ययन सकेपछि वन्शिका दिल्ली आइन् । यहाँ आए पछि उनले अनुसन्धान कार्य गर्न थालिन् । उनले बजार र मागको बारेमा राम्रोसँग जानकारी लिइन् । उनका बुबा कपडा क्षेत्रका थिए, परिवारले उनीसँग काम गर्न थाले । अगस्त २०१७ मा, उनले कन्या नामको आफ्नै कम्पनी बनाइन् । उनको कम्पनिले आफ्नो वेबसाइट पनि खोल्यो । त्यसबेला उनले करीव १ लाख रूपैयाँ खर्च गरेकी थिइन् ।
वन्शिका भन्छिन्, ‘अनुसन्धान कार्यको क्रममा मलाई थाहा भयो कि भारतमा कार्यालयमा काम गर्ने महिलाहरूको लागि पश्चिमी पोशाक विकल्पहरू थोरै छन् । यदि भए पनि गुणवत्ता अन्तर धेरै उच्च छ । मैले निर्णय गरें कि किन त्यस्तो केहि खालको डिजाइन नगरौँ जुन कम लागत, राम्रो क्वालिटी र १० देखि ५ बजेको शिफ्टमा काम गर्ने महिलाहरूले आरामसँग लगाउन सकुन् ।’
उनले अगाडी थप्दै भनिन्, ‘त्यस पछि हामीले केहि लुगाहरू सिलाउन सुरू गर्थ्यौं र यसलाई अनलाइन विज्ञापन गर्थ्यौं । जनताको प्रतिक्रिया राम्रो थियो र राम्रो आम्दानी पनि भयो । त्यस पछि हामीले ठूलो स्तरमा काम गर्न थाल्यौं । कपडाहरू विभिन्न ठाउँहरूबाट मगाउन सुरु गरियो र ट्रेन्डनुसार पोशाक तयार गर्न सुरू गर्यौं । माग बढ्दै जाँदा हाम्रो व्यापार पनि बढ्यो ।’
उनी भन्छिन्, ‘केही दिन पछि हामीले धेरै होटलहरू र रेस्टुरेन्टहरूबाट धेरै ईमेलहरू र सन्देशहरू प्राप्त गर्न थाल्यौं जसले हाम्रा लागि पोशाक तयार गर्नुहोस् भन्दै थिए । सुरुमा हामीले तिनीहरूलाई बेवास्ता गर्यौं तर त्यसपछि हामीले महसुस गर्यौं कि यस क्षेत्रमा धेरै राम्रो भविष्य छ ।
यस पछि, २०१९ मा हामीले अर्को कन्या पोशाक नामको अर्को सेटअप शुरू गर्यौं । यसले हामीलाई फरक पहिचान दियो । हामीले २०० भन्दा बढी होटलहरू, रेस्टुरेन्टहरू र स्कूलहरूको लागि पोशाक डिजाइन गर्न सुरु गरेका छौं । त्यसपछि मैले विवाह गरे र मुम्बई सरे । हामीले हाम्रो कम्पनी र सेटअप यहाँ सार्‍यौं । यस वर्ष सबै ठीकठाक हुँदै थियो तर कोरोना आइहाल्यो ।’
वंशिका भन्छन्, ‘जब कोरोनाको कारण लकडाउन भयो, हाम्रा धेरै परियोजनाहरू बन्द भए, धेरै मागहरू रद्द भए । तर स्पष्टसँग, त्यस पछि पनि, हामी घाटाको सट्टा अझ बलियो भयौँ । मेरो श्रीमान् अभिजीत काजीसँग स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयबाट एमबीए छ ।
उनीसँग बजार र फाइनेन्स क्षेत्रमा धेरै राम्रो अनुभव छ र यस क्षेत्रमा पनि काम गरिसकेका छन् । यस वर्षको शुरूमा, जब कोरोना चीन र अन्य देशहरूमा फैलियो, मेरो श्रीमान्‌ले आफ्ना साथीहरूसँग पीपीई किटको बारेमा कुरा गर्न थाले । उनीहरूलाई थाहा थियो कि भविषयमा भारतमा पनि यो आवश्यक हुनेछ ।’
उनले अगाडि थपिन्, ‘यस पछि हामीले यसमा अनुसन्धान कार्य गर्न सुरु गर्यौं, विशेषज्ञहरूबाट जानकारी जम्मा गर्यौं । राम्रो गुणस्तरका कपडाहरूको लागि सोध्यौं । किनकि पीपीई किटको बारेमा पहिले धेरै जानकारी थिएन, त्यसैले हामीले गुगलबाट केहि नमूनाहरू हेर्यौं
। त्यसपछि कन्या मेड (निर्माण) नाम गरेको नयाँ उद्यम शुरू गर्यौँ । हामीले हाम्रा तयार गरिएका पीपीई किटहरू डीआरडीओमा पठायौं, त्यहाँबाट स्वीकृति पाएपछि हामीले यसलाई बजारमा बेच्न सुरु गर्यौँ ।’
उनी भन्छिन्, ‘जब पीपीई किटको माग देशमा उच्च भएको थियो, हामी यसका लागि तयार भइसकेका थियौं, बिभिन्न अस्पतालहरुमा पुग्यौं र हाम्रो पीपीई किटको बारेमा बतायौं । सुरुमा उनीहरूले सम्झौता गरिरहेका थिएनन्, हामीले फोन र सन्देश पठाउनुपर्‍यो । तर जब सम्झौता पुष्टि भयो, हाम्रो क्षेत्र बिस्तारै बढ्दै गयो ।
अहिलेसम्म हामीले ६० लाख भन्दा बढी पीपीई किटहरू आपूर्ति गरिसकेका छौं । एक पीपीई किटको लागत ४०० देखि ६०० सम्म पर्छ । हामीले बीएमसीलाई हजारौं पीपीई किटहरू पनि दियौं ।
अहिले गुजरात र मुम्बई दुबै राज्यमा हाम्रो कम्पनी छ । लकडाउनको क्रममा पीपीई किटको तयारी र आपूर्ति गर्न धेरै समस्या भएको थियो। त्यस समयमा न त पसल खुल्ला थियो न त कुनै मजदुर काम गर्न इच्छुक थिए। पाली झोलाका लागि पनि धेरै मेहनत चाहिन्छ ।’
वर्तमानमा वन्शिका र उनका पति तीनवटा उद्यममा संलग्न रहेका छन् । कन्या, कन्या पोशाक र कन्या निर्माण । कन्या निर्माण कोरोना पछि यो वर्ष शुरू भयो । वन्शिकाकानुसार यो उनीहरुको तेस्रो उद्यम हो । यसका लागि उनीहरुले सब भन्दा ठूलो सेटअप निर्माण गरेका छन् ।
उनले भनिन, ‘हामीले यसलाई अझ विस्तार गर्नुपर्नेछ, हामी चिकित्सा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै कपडाका चीजहरू बनाउने प्रयास गर्दछौं । यस क्षेत्रमा आउँनु अघि र पछाडि अनुसन्धान कार्य सफलताको जड हो ।’